Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta izitshalo ezinwabuzelayo ezibangelwa amagciwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta izitshalo ezihuquzelayo ezibangelwa amagciwane
Njengoba sibonile ezikhathini eziningi, ukuguquguquka kwesimo sezulu kunemiphumela yomhlaba cishe kuzo zonke izici esizaziyo. Sikhuluma ngakho ushintsho esimweni sezulu olulawula zonke izici ezenza imvelo ibe yilokhu okuyikho, ezenza izidalwa eziphilayo ziphile ngendlela ezenza ngayo futhi njengoba zishintshile futhi zavela kuwo wonke umlando.
Kulokhu ngiza ukuzokhuluma nawe ngomphumela wokuguquka kwesimo sezulu ezihuquzelayo nezimbali zazo zebhaktheriya. Ukushintsha kwesimo sezulu kuhlobene kanjani nezimbali zebhaktheriya ezihuquzelayo?
1 Ukuxhumeka Kwemvelo Nokuguquka Kwesimo Sezulu
2 Izilwane ezihuquzelayo ziyathinteka ngokuguquka kwesimo sezulu
Ukuxhumeka Kwemvelo Nokuguquka Kwesimo Sezulu
Okuthile abantu abahlulekayo ukukucabanga ukuthi kungokwemvelo kanjani konke kuhlobene futhi kuxhunyiwe. Imvelo inakho kanjani amanethiwekhi angapheli axhunyiwe anokulinganisela, ezikhathini eziningi ezintekenteke, nokuthi leli bhalansi lingehla ngenxa yabenzeli bangaphandle njengokushintsha kwesimo sezulu. Isibonelo, ukuthi ukwanda okulula kwamazinga okushisa olwandle kungadala kanjani ukufa kwezinhlobo eziningi zezinhlanzi eziphila ngenxa yamakhorali.
Njengoba sesikhulume kaningi lapha kwiWeb Meteorology, amakhorali asengozini enkulu ekushintsheni kwamazinga okushisa kwamanzi adalwa ukufudumala komhlaba. Ngenxa yamakhorali, uchungechunge lwezinhlobo eziphilayo njengoba zinesiphephelo kanti ezinye izinhlobo ze-algae nazo zingaphila ngokusebenzisana kuleyo ndawo efanayo. Yebo, uma amakhorali ehlushwa ukwanda kwamazinga okushisa, zonke izinto eziphilayo ezincike kuma-coral ukuze zisinde nazo zizothinteka, yize zithinteka ngqo ngokwanda kwamazinga okushisa kwamanzi.
Kulokhu, ngilapha ukuzokhuluma ngezilwane ezihuquzelayo nezimbali zazo ezibangelwa amagciwane. Ukuze uqonde kangcono ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kungazithinta kanjani izimbali zamagciwane ezihuquzelayo, kufanele ukhumbule ukuthi konke kuhlobene emvelweni nokuthi konke kufanele kwenziwe.
Izilwane ezihuquzelayo ziyathinteka ngokuguquka kwesimo sezulu
Ukushintsha kwesimo sezulu kungazithinta kanjani izitshalo ezihuquzelayo zebhaktheriya? Yebo, ngendlela yokulungisa kahle: ngokunciphisa inani lamagciwane ahlala emathunjini akho. Lokhu kungaholela ekwehlisweni kwamathuba akho okusinda.
Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Nature luveza ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke okuholela ekukhuleni kwama-2 kuya ku-3 degrees kungasho ukuncishiswa ngama-34% okwehlukahluka kwama-microorganisms emathunjini e-peat bog lizard (Vivipara zootoca), okwenziwa ngalo isifundo. Okukhathaza kakhulu ukuthi ukwenyuka kwamazinga okushisa aphakathi kwamabili kuya kwamathathu emazingeni okushisa aphakathi komhlaba yilokho okubikezelwa yizinhlobo zamanje zokushintsha kwesimo sezulu.
Ukuze kuhlolwe futhi kufundwe ngomphumela wamazinga okushisa kulezi zibankwa, ososayensi babeka endaweni evaliwe enezinga lokushisa elilawulwayo. Bahlaziye amasampula wamathumbu amabhaktheriya abo ukubona ukuthi hlobo luni lwebhaktheriya ababenalo emathunjini abo. Ngokufunda izibankwa ezazisesimweni sokushisa esihlukile, bakuthola lokho ukwehluka kwamagciwane okugaya kwakuphansi kakhulu kulezo zibankwa ezihlala ezimweni ezifudumele. Ngaphezu kwalokho, bakwazi ukuphetha ngokuthi lesi simo sinomthelela omkhulu emathubeni abo okusinda.
Yize ukwanda okulinganayo kwamazinga okushisa kuye kwabonakala kuthinta izitshalo zebhaktheriya futhi kanjalo namathuba abo okusinda, kusadingeka obunye ubufakazi ukuze buphathekayo. Wabuye wakucabanga ukuthi kungenzeka kakhulu lokho imiphumela efanayo iyabonakala nakwezinye izilwane ezinegazi elibandayo njengezilwane ezihuquzelayo nezilwane eziphila ezweni nasemanzini ezincike emithonjeni yangaphandle yokushisa komzimba.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukutholakala kwamagciwane ekugayweni komzimba kubalulekile ukuze kwenziwe kahle. Ngakho-ke, kufanele kwenziwe izifundo ezintsha ezibheka lo mphumela wokushintsha kwesimo sezulu kwezinye izidalwa eziphilayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta izitshalo ezihuquzelayo ezibangelwa amagciwane
Le yimephu yemiphumela yokushintsha kwesimo sezulu eSpain